Oganda: Maneho hevitra momba ireo baomba nipoaka ny mpitoraka blaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jolay 2010 7:50 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Italiano, 繁體中文, 简体中文, Português, Français, اردو, Swahili, বাংলা, English
Mitatitra ireo haino aman-jery Ogande fa mihoatra lavitra ny 40 ny olona maty, miampy ampolony any ho any naratra tamin'ireo fipoahana. Nihevitra ireo polisy Ougande fa ny milisy Somaliana avy amin'ny vondrona al-Shabab no tao ambadiky ny fanafihana. Ny iray amin'ireo mpibaiko ilay vondrona dia niantso tsy ela akory izay fanafihana an'i Oganda , izay mandray anjara amin'ny fanmpandian-tany ataon'ny Tafiky ny Firaisambe Afrikana any Somalia . Nidera ireo fanafihana ilay vondrona fa tsy nilaza kosa ho tompon'andraikitra.
Ireo olona niharan'nyfipoahan'ireo baomba roa nahafaty tany Kampala miandry ny fitsaboana ao amin'ny hopitalin'i Mulago. Sary avy amin'i Trevor Snapp. Nampiasaina nahazoana fanomezan-dàlan'ny mpaka sary .
Manoratra i Gay Uganda, mpitoraka bilaogy Ogande iray:
Voatafika i Oganda . Marina e, tena fanafihana ny maha-olombelona izy ity . Iza no mbola sahy ho faly amin'ity zavatra mahatsiravina ity ? Raha ny fahitàna azy , ireo mpihoko Somaliana no faly . Satria miady amin'ireo tafiky ny Firaisambe Afrikana any Somalia ry zareo, izay nakana azy ireo tamin'ny fametrahany ny fanjakana Silamo fehezin'ny lalàna Sharia.
…. Ireo mpiray tanindrazana amiko no hitako, olombelona izay tsy manao zavatra ratsy mihoatra ny mijery baolina kitra no novonoina sy nanjary kilemaina, amin'ny anaran'ireo ‘idéaux’ mety tsy ho takatry ny sain-dry zareo, hetsika izay tsy ho vitan'izy ireo akory ny hifehy izay kely indrindra aminy.
Mampitandrina i Ernest Bazanye mba tsy hitsambikinana aloha loatra hankamina tsoa-kevitra an-kamehana mikasika ireo izay nametraka ireo baomba :
Aloha loatra raha izao dia hiteny hoe iza no tompon'andraikitra ary inona no antony, ary na dia re manako any ivelany aza fa karazana fanaovana vivery ny aina tamin'ny baomba nataon'i Al-Shahab, fikambanan'ny mpampihorohoro Somaliana izany. Tokony ho fantatsika manombok'izao fa tsy hipoitra vetivety ny marina ary lasa aloha loatra ireo tsoa-kevitra raha amin'izao fotona izao .
Tany amin'ny hopitalin'i Mulago i Trevor Snapp, mpaka sary fanadihadiana mipetraka any Kampala, izay nandraisana ireo niharam-boina, taorian'ny fanapoahana baomba . Nanoratra izy:
Nihazakazaka nanodidina ny teo anoloan'ny toerana fandraisana ireo fianakaviana raha toa kosa ka mivoaka miditra amin'ny tranom-pandidiana ireo mpitsabo sy ireo niharam-boina mihoson-drà. Eo an-dalantsaran'ny trano fandidiana, mivalampatra eo amin'ny tany no matory ny lehilahy iray, mandeha ra hatrany amin'ny lohany, ary tena tsy hay fantarina mihitsy na velona izy na maty. Somary mihataka dingana vitsy eo amin'ny trano fampiriman'entana, nanamboatra tranom-paty vonjimaika ireo mpiasa, vatana 6 no mitsotra eo amin'ny tany, ny sasany tsy eo ny akanjony.Tanora avokoa izy ireo .
Maro ny mpitoraka blaogy no tohina amin'ny hoe tao Kampala no nitrangana fipoahana baomba, izay fantatra enran-tnay ho iray amin'ireo renivohitra milamina indrindra manerana an'i Afrika. Joshua Goldstein, mpanoratra fahiny tao amin'ny Global Voices ary zatra nipetraka tany Kampala , dia mamariparitra ireo toerana nisian'ny fipoahana baomba:
Toeram-pisotroana lehibe ny Rugby Club ao Kampala , eo akaikin'ny kianja filalaovana, toerana izay falehan'ireo mpianatra amin'ny anjerimanontolo ao Kampala mandany andro miaraka amin'ireo namany. Raha nanana fikambanam-pirahalahiana i Oganda, ity no toerana mety ho nanaovana ny fetin-dry zareo . Eto, ny manan-tsaina mihaja misotro Nile Special anatina lafika reggae sy hip hop mitatatata . Amin'ireo andro faran'ny herinandro, mijery baolina lavalava izy ireo, mitsinjaka mba hihazonana ny masoandro .
… Mamakivaky ny tanana Etiopiana, midina amin'ny lalana avy amin'ny Ambasady Amerikana, no misy ny ivon'i Kabalagala, ny Las Vegas ao Kampala. Trano fisakafoanana, ny tena farany raitra amin'ny antsasak'ireo ampolony na ireo trano fisakafoanana Etiopiana ao anatin'ny 500 metatra, no mipetraka any amin'ny fihaonan-dàlan'i Ggaba Road sy ny Tank Hill Road. Amin'ny tolakandro, mandany ny sesitaniny amin'ny fitsakoana miraa sy miresaka ireo vaovao nandritry ny andro ireo mpanao gazety Etiopiana mpanohitra . Amin'ny alina, manafana ireo trano fisotroana sy ireo fiarahana mandihy ny mpiaramonina.
Manoratra i Sleek :
Mba hanomezana vinavina kely an'zany, asehoko fa hatreto, anisan'ireo toerana izay azon'ny tsirairay andehandehanana avy any amin'ny tendro irain'ny tanàna iray mankany amin'ny iray i Kampala amin'ny 03.00 maraina. Ary isika koa no karazan'ireo olona mitaraina amin'ny fiakaran'ny vidin-tsolika, ireo hetra ambony alaina amin'ny vola miditra, saram-pifandraisana tena tsy izy mihitsy… ny vidim-piainana andavanandro tena lafo tafahoatra.Nefa ao anatin'izany rehetra izany, mbola mankany amin'ity toerana vaovao fakana aina ity isika ary mandoa 5,000 UGX ho an'ny labiera iray. Dia mameno io toerana io isika ary miady ara-bakiteny ny làlana mankany amin'ny trano fisotroana mba hahazo zava-pisotro. Ary izay no ankamaroan'ny toerana fakàna aina .
Ary dia mandre fipoahana baomba ianao avy eo…